गल्कोटमा दुई छुट्टा छुट्टै सडक दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाईते एकको अवस्था गम्भीर ! | ebaglung.com
गल्कोटमा दुई छुट्टा छुट्टै सडक दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाईते एकको अवस्था गम्भीर !
२०७४ असार २१, बुधबार १६:५३	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार 1450 पटक हेरिएको !
घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७४ असार २१ । गल्कोटमा भएका छुट्टा छुट्टै सडक दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाईते भएका छन् । घाईते मध्य एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गल्कोट नगरपालिका बाड नं २ भुमखानीमा मंगलबार साँझ बसबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुर्तिबाङ देखी काठमाडौका लागी छुटेको लु २ ख ७७८ नम्बरको बसबाट लडेर घाईते भएका बुर्तिबाङ १ खल्लेका २३ बर्षिय लोकेश थापाको बुधबार उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
भुमखानीमा सबारी चलाउदै गर्दा पहिरो झरेपछि सबारी रोकेर अगाडी बाटो हेर्न जाने क्रममा बसको ढोकाबाट लडेर थापा घाईते भएका थिए । उनलाई मंगलबार नै उपचारको लागी गण्डकी अन्चल अस्पताल पोखरा लगिएको गल्कोटका ट्राफिक प्रहरी हवल्दार महेन्द्र बहादुर खत्रीले जनाकारि दिए ।
लगातारको बर्षाले बाटोको ठाउँठाउमा पहिरो जादाँ बाटो साघुँरो भएको छ । सबारीको लागी प्रयाप्त बाटो छ कि छैन् भनेर हेर्न जादा लडेको हुन सक्ने प्रहरी चौकी हटियाले जनाएको छ । गम्भीर घाईते भएका थापाको आज बिहान निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । सो बसलाई हटिया प्रहरीचौकीले नियन्त्रणमा लिएको बताईएको छ ।
यसैवीच आज विहान गल्कोटमा बुधवार बस र जिप ठोक्कीदा २ जना घाईते भएका छन् । घाईते मध्ये एकको अबस्था गम्भीर रहेको छ । गल्कोट नगरपालिका बाड नं २ मौरियामा आज बिहान करिब नौ बजेको समयमा बुटबलबाट बुर्तिबाङको लागी छुटेको लु १ ख ६७११ नम्बरको बस र घुस्मेलीबाट पोखराको लागी छुटेको ध १ ज १७ नम्बरको जिप आपसमा ठोक्कीदा दुर्घटना भएको हो ।
गम्भीर घाईते जिप चालक गलकोट नगरपालिका बाड नं २ नरेठाटीका हरिप्रसाद पुनको गण्डकी मेडिकल अस्पताल पोखरमा उपचार भैरहेको तथा अन्य घाईतेको धौलागीरी अन्चल अस्पताल बागलुङमा उपचार पश्चात फर्किएको गल्कोटका ट्राफिक प्रहरी हल्दार महेन्द्र बहादुर खत्रीले बताए। प्रह खत्रीका अनुसार बुटबलबाट बुर्तिबाङका लागी छुटेको बस गुल्मी तर्फको बाटो बन्द भएपछि बागलुङ हुदै बुर्तिबाङमा जानेक्रममा दुर्घटना भएको हो । बर्षातको समयमा चिप्लोबाटोमा सबारीको तिब्र गति तथा रङ साईडबाट चलाएको कारणले दुर्घटना भएको हटिया प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
पश्चिमी व्यापार केन्द्र बुर्तिबाङ बजार हिलाम्मे
हरिचौरमा स्वास्थ्य जोखिम परीक्षण अन्तर्गत ५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण
२०७५ मंसिर २, आईतवार १९:४७
२०७५ मंसिर २, आईतवार १८:००
गल्कोट घुम्टे विकास मन्चको साधारण सभा सम्पन्न, ‘अस्मी’ उपन्यासको विमोचन !